सरकार, सबै न्यायाधीश र वकिलहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
सरकार, सबै न्यायाधीश र वकिलहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर
कर्मचारी एवं प्रशासकहरुलाई त झन् अदालत किन चाहियो र ?
२०७८ पुष २४, शनिबार १३:२२:००
काठमाडौँ । अहिले न्यायालयलाई झण्डैझण्डै कोमामा पुर्याइएको छ । यसमा सबैले हाइसन्चो मानेका छन् । सत्ता पक्षलाई हाइसन्चो छ, किनकि उसका स्वेच्छाचारी निर्णय र कदममा अदालत बाधक बन्ने सम्भावना सकिएको छ । प्रतिपक्षी झन् ढुक्क छ, किनभने हिजो उसले सत्तामा छँदा गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्तिहरु बदर हुने समय परपर धकेलिरहेको छ ।
काठमाडौँको धनाढ्य वर्ग त झन् अदालत खारेजै होस् भन्ने चाहन्छ । किनभने, सत्ता र शक्तिलाई प्रभावमा पारेर उसले राज्यको ९० प्रतिशत स्रोत आफ्नो हातमा लिइसकेको छ । कर्मचारी एवं प्रशासकहरुलाई त झन् अदालत किन चाहियो र ? उनीहरुलाई अदालतसँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि विघटन गर्नुपरेको छ।अदालतभित्रका न्यायाधीशहरु कोही अनुशासनमा बस्नुपरेको छैन । दोष जति सबै प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइदिएर सबैजना एक से एक चोखो र क्रान्तिकारी देखिने अवसर उनीहरुले प्राप्त गरेका छन् ।
बडेमानका वकिलहरु अहिले सडकमा छन् । उनीहरु न्यायालय शुद्धीकरणका नारा लगाइरहेका छन् । उनीहरुले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि एक मात्र अचूक उपाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ठानिरहेका छन् । राणालाई गलहत्याउन पाएपछि अदालत राम राज्य बन्ने भाष्य अहिले निर्माण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई झनै हाइसन्चो भएको छ । उनले काम गर्नुपरेको छैन । जागिर पाकेकै छ । पृष्ठभूमिमा सबै राजनीतिक दलले टेको दिइरहेकै छन् । राजनीतिक ओत पाइरहेसम्म आफूलाई कसैले हल्लाउन सक्दैनन् भन्ने उनलाई लागेको छ । तर, आफूमा निहित शक्तिको प्रयोग गर्नु संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य र इमानदारी हो भन्ने सामान्य बुझाइसम्म उनमा नहुनु अर्को विडम्बना हो ।
अदालतको निष्क्रियता र निरीहतालाई तत्कालका लागि सबैले आफ्नो सुविधाका रुपमा लिए पनि भित्रभित्रै यसले क्यान्सरको रुप लिँदै छ । यो क्यान्सर अहिले बाहिरबाट हेर्नेहरुले ठानेका छन्, न्यायालयको मात्र हो । बारले ठानेको छ, यो बेन्चको समस्या हो । बेन्चभित्रका बाँकी सारा न्यायाधीशले ठानेका छन्, यो त प्रधानन्यायाधीश राणाको निजी समस्या हो । यो बुझाइ रहँदासम्म अदालतको समस्या समाधान हुनेवाला छैन । र, अहिलेको समस्याको ठीक पहिचान गरिएन र समयमै उपचार गरिएन भने यो क्यान्सर बढ्दैबढ्दै राज्यका सारा अंग–उपांगहरुलाई खत्तम बनाउनेछ ।
अहिले देखिएको समस्याको सही उपचार भनेको न्यायिक बेथितिको समग्र समाधानको खोजी हो । त्यसका लागि बहालावाला र भूतपूर्व सबै न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन हो । न्यायाधीशको मात्र छानबिन गरेर हुँदैन । न्यायिक बेथितिको अर्को महत्त्वपूर्ण अंग बार हो । त्यसैले अहिलेसम्मका सबै बेडमानका वकिलहरुको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ । उक्त आयोगलाई न्यायालयसम्बद्ध सबैको सम्पत्ति र कारोबारको विवरण माग्ने, बयान लिने, तिनको कारोबार जोडिएका अरु व्यक्तिहरुमाथि निगरानी गर्ने अनि अदालतमा मुद्दा पनि आफै दायर गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यो काम हालका अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्न सक्दैनन् । बरु नयाँ र विशेष प्रकारको ऐन नै ल्याएर त्यस्तो शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ ।
अहिले सर्वोच्चमा भएका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीश विवादित भइसकेकाले ती सबैलाई काम गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका उम्दा न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा ल्याएर न्याय निरुपणको काममा लगाउनुपर्छ । यति नगरेसम्म न्यायालय शुद्धीकरणका नाममा जति स्यालहुइँया मच्चाए पनि केही हुनेवाला छैन । अहिलेको अवस्था जति लम्बिन्छ, बचेखुचेको न्यायालयको साख र अस्तित्व बागमतीमा मिलाउने काम उति नै तीब्र रफ्तारमा हुनेछ ।